वसन्तपुरमा नाचेर भाइरल भएकी सम्झना भन्छिन्ः अचेल टिकटक बनाउनै सार्वजनिक ठाउँ घुम्छु :: Setopati
वसन्तपुरमा नाचेर भाइरल भएकी सम्झना भन्छिन्ः अचेल टिकटक बनाउनै सार्वजनिक ठाउँ घुम्छु
सम्झना राई विश्वकर्मा
अचेल टिकटकमा सम्झना राई विश्वकर्माका भिडिओहरू निकै चर्चामा छन्।
वसन्तपुर, न्युरोड जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा सम्झनाले नाचेका भिडिओ धेरैले रूचाएका हुन्। धेरैले उनलाई आत्मविश्वासी र साहसी भन्दै तारिफ गरेका छन्।
२७ वर्षीया सम्झना नृत्य कोरिओग्राफर हुन्। कीर्तिपुर, पाँगादोबाटोस्थित 'रिमेम्बर डान्स कल्चर एन्ड ड्रेस हायर सेन्टर' की संस्थापक र सञ्चालक पनि।
नाच सिकाउनुका साथै सेन्टरबाट कार्यक्रमका लागि सांस्कृतिक लुगा, गाउन, लेहेंगा लगायत लुगाकपडा भाडामा उपलब्ध गराइन्छ। विगत ८ वर्षदेखि सम्झना एक्लै यो सेन्टर चलाइरहेकी छन्।
अहिले एकाएक आफ्नो नृत्यका कारण 'भाइरल' भएपछि सम्झना गदगद् छिन्। टिकटक खोलेको दुई वर्षपछि आफ्नो प्रतिभा ठूलो समूहमा पुगेको महसुस गरेकी छन्।
सानै उमेरदेखि नाच्न सिपालु सम्झनालाई याद छैन, उनी कहिले स्टेज कार्यक्रममा लागिन्। १३ वर्षकी हुँदा पहिलो पटक डान्स एकेडेमीमा नाच सिकेको सम्झिन्छिन्।
'आफ्नो नृत्य, प्रतिभा र सपना खुलेको महसुस भइरहेको छ। यतिका वर्षको संघर्षपछि मिठो फल पाएझैं भएको छ,' सम्झनाले खुसी साट्दै भनिन्।
so here ##take2 ???##dance ##dancers ##support ##nepaliuser ##basantapur ✌@harry_kc1 ❤
♬ Originalton - No I don't think så
'बुवाको साथीको एकेडेमीमा गएर झन्डै एक वर्ष सिकेकी थिएँ,' उनी भन्छिन्, 'नाचगानमा लागेको परिवारले रुचाउनु हुन्थेन। तर म जसरी भए पनि कक्षा जान्थेँ। घर हुँदा पनि नाचिरहन्थेँ।'
नृत्यप्रतिको सोखकै कारण २०६६ सालमै एसएलसी सकेर उनले डान्स सेन्टर खोलिन्। कलिलो उमेरमा काम थालेकी उनलाई त्यो बेला पत्याउने कोही भएनन्। आर्थिक सहयोग गर्न परिवार पनि अघि सरेन। चिनजानका एक दाइसँग पाँच हजार सापटी लिएर कीर्तिपुर, हनुमानघाटमा सानो कोठा भाडा लिएर सेन्टर खोलेकी थिइन्।
कीर्तिपुरकै सहिद स्मरक कलेजबाट व्यवस्थापनमा प्लस टु भर्ना भएपछि उनले सेन्टर बन्द गरिन्। पढ्दै गर्दा सेल्सगर्ल, सहायक अकाउन्टेन्ट भएर काम गरिन्। यी काम उनले घरमा आर्थिक सहयोग दिन गरेकी थिइन्।
'आर्थिक हिसाबमा हामी बलिया थिएनौं। घरकी जेठी छोरी भएकाले जिम्मेवारी थियो। कमाएर घरमा दिन्थेँ,' उनले सुनाइन्।
सम्झना बिहानै कलेज जान्थिन्। दिउँसो काम गर्थिन्। बेलुका फुर्सदमा नाच्न थाल्थिन्। जति थकाइ भए पनि उनले नाच्न छाडिनन्। नृत्यलाई तनाव कम गर्ने माध्यम समेत बनाएको बताउँछिन् उनी।
अरू कामबाट सम्झनाले परिवारलाई आर्थिक सहयोग त गरिन्, तर सन्तुष्टि मिलेन। आफ्नो डान्स सेन्टर फेरि सुरू गर्नु थियो। यसपटक अलि धेरै लगानीमा राम्रो ठाउँमा खोल्ने सोचेकी थिइन्। त्यसैले काम गर्दै पैसा जम्मा गरिन्।
'३५ हजार जम्मा भएको थियो,' उनले प्लस टु सकेर, २०६९ सालतिर पाँगादोबाटोमा पुरानै नाममा डान्स सेन्टर खोलिन्। ठूलो ऐना, कार्पेट र स्पिकर राखिन्। उनी लोक, मोडर्न, हिपहप, फ्री-स्टाइल, क्लासिकल, कन्टेम्पोरी, जुम्बा, एरोबिक्स लगायत नृत्य सिकाउँछिन्। २०७१ सालदेखि भाडामा लुगा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिन्।
सम्झना यी सबै काम एक्लै सम्हाल्छिन्। निकै व्यस्त हुँदा आफ्ना दुई बहिनीमध्ये माइली अन्जना राईको सहयोग मिल्छ।
बहिनीहरूसँग सम्झनाको सम्बन्ध अहिले राम्रो छ। तर उनले बिहे गरेको झन्डै दुई वर्षसम्म घर-परिवारसँग सम्बन्ध पूर्ण रूपमा टुटेको थियो। सम्झनाले अन्तर्जातीय (विश्वकर्मासँग) बिहे गरेकी हुन्। २०७२ को भूकम्पपछि उनीहरूको भेट भएको थियो। झन्डै डेढ वर्षको चिनाजानीपछि उनीहरूले भागी विवाह गरे।
##jhyaure ##nepalifolk ##dancer ?vibing here some jhyaure for u people?keep support?tq for ur pre nachmeri in 12K❤ tq?
♬ original sound - Bivesh rai
'घरमा मान्नु हुन्न भन्ने थाहा थियो। त्यसैले भागेरै विवाह गर्‍यौं,' श्रीमान र घरको पूर्ण सहयोग रहेको उनी बताउँछिन्, 'यो क्षेत्रमा लाग्न माइतीबाट उत्ति सहयोग मिलेन जति घरबाट मिल्दैछ।'
दुई वर्षपछि आमा र बहिनीहरूसँग सम्झनाको सम्बन्ध न्यानो हुँदै गयो। बुवासँग भने अझै चिसो भएको उनी बताउँछिन्।
विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर कोरिओग्राफीमा लागेकी उनले दर्जन बढी भिडिओमा साइड डान्सरका रूपमा पनि काम गरिन्।
'तर आफैंलाई त्यो स्थानमा सीमित गर्न सकिनँ। त्यसैले सेन्टरमै समय दिन थालेँ,' उनी भन्छिन्, 'अरूलाई सिकाँउदा र नेतृत्व लिन पाउँदा खुसी लाग्छ।'
सम्झना र उनका विद्यार्थी मिलेर थुप्रै स्टेज प्रस्तुति दिएका छन्। लकडाउनअघि सम्झनाले दैनिक २५ देखि ३५ जनालाई सिकाउँथिन्। लकडाउनपछिको फुर्सदमा उनी टिकटकमा सक्रिय भइन्।
'प्रायः डान्स गरेकै भिडिओ राखेँ। त्यही बेलादेखि भ्युज र लाइक बढ्न थाल्यो,' उनी भन्छिन्, 'प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक र उत्साहजनक हुन्थे। त्यसले भिडिओ निरन्तर पोस्ट गर्न हौस्यायो।'
उनका प्रायः भिडिओमा हजारौं भ्युज कट्छ। सयौं प्रतिक्रिया आउँछन्।
##jaiphulisakyo ❤##nepali ignore my last leg move?do follow?@harry_kc1 ?wait for ##bihindthescenes ?
♬ original sound - Milan Newar
'पहिले पहिले म घुम्न जाँदा टिकटक बनाउँथे। अचेल टिकटक बनाउन सार्वजनिक ठाउँ घुम्छु,' उनले भनिन्।
सम्झना आफ्नो प्रतिभा अझै धेरैमाझ देखाउन आतुर छिन्। उनलाई नृत्य सोखका रूपमा मात्र होइन, पेसागत रूपमै अघि बढाउन मन छ। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द भए पनि उनको काम अहिले विस्तारै सुरू हुँदैछ।
उनी भन्छिन्, 'यो क्षेत्रलाई नराम्रो सोच्ने हरेकमा परिवर्तन ल्याउन मन छ। मेरा विद्यार्थीको प्रस्तुति राम्रो हुनु नै मेरो सफलता मान्छु।'
sorry behind the scenes ?##samjhanaraibiswokarma ?##dancer ???
♬ original sound - enolabedard
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, ०४:३५:००